Siphonononge esweni i-27-intshi i-Philips esweni (276E7QDSW) nge-SWEEPSTAKES | Iindaba zeGajethi
Amagosa okubeka esweni awasabekwa ngaphezulu kwayo nayiphi na into emsebenzini okanye uxanduva lokusebenzisa iPC (ekunene ngexesha le-laptop boom). Abantu bayayiqonda into yokuba ukubek'esweni okuhle kunokuba lutyalomali oluhle xa kuziwa ekusebenziseni ukusebenza kwakho, kwaye kunokuba yinto ebaluleke ukuba, umzekelo, ujonge ukudlala kwiPC yakho. Kungenxa yoko le nto ezi monitors zikhule ikakhulu kubungakanani kunye nokubalulwa.
KwiActualidad Gadget sifuna ukukucebisa, yiyo loo nto sisebenzela ukukunikezela nge Uhlalutyo olunzulu lwe-27-intshi ye-Philips esweni (276E7QDSW), kodwa sikuphathela iindaba ezingcono, ukuba ufuna ikhululeke ngokupheleleyo inokuba yeyakho ngokuthatha inxaxheba kwi-raffle yethu. Ungaphoswa luhlalutyo, masiye apho.
UPhilips uye wakuvuyela ukusinika esweni esomeleleyo sokuba sivavanye nzulu kwaye sinikezele ngebhaso elihle kubafundi abathembekileyo beActualidad Gadget.Oko besikuvavanya kwaye ngokuqinisekileyo sichasene nezigqibo zethu, kodwa ekugqibeleni kolu hlaziyo siza kukushiya imiyalelo ukuze ubenokuyifumana ngokulula. Ngaphandle kokuqhubeka, siqhubeka nohlalutyo, sisebenzise isalathiso sethu ukuya kwiindawo ezifanelekileyo kwaye uvule amehlo akho ngokubanzi, kuba namhlanje unokuba nokubeka iliso elitsha.
1 Uyilo: Izinto zepremiyamu kunye nemvakalelo elungileyo
2 Iimpawu: Umsebenzi olungileyo osebenza kunye
3 Ukuphuculwa kwesoftware: Iimpembelelo zobuninzi bePhilips
4 Unxibelelwano kunye nonxibelelwano lomsebenzisi: Ke wena awuphosi nantoni na
5 Thatha inxaxheba kwirafu
Uyilo: Izixhobo premium kunye neemvakalelo ezilungileyo
Into yokuqala ebonakalayo evela kwi unboxing Sisiseko eso, into eyalatha kwisinyithi esinika ukuqina kunye nokuthembeka kwiindawo ezilinganayo, sonwabe kakhulu xa kufikwa kwindibano elula, kwaye ayizukufuna ngaphezulu kwesakhono esincinci, nkqu nezixhobo. Isiseko esimile u "U" asikhethwanga ngabaninzi, nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo imigca ethe tye kwaye emfutshane, isinika ilahleko encinci yendawo kwidesika., ngokungafaniyo nezinye "O" iziseko ezimilise ezithatha ngaphezulu kwaye zibonelela ngendawo encinci eluncedo phantsi kweliso. Kuya kufuneka sigxininise ukuba isiseko sisivumela ukuba silungelelanise ukutyekela, kodwa hayi ukuphakama.
Kwelinye icala, igqunyiwe ngeplastiki yeJetBlack, kunye neefreyimu ezincinci kwaye ziphantse zilingane macala onke. Umqolo ubumhlophe ngokupheleleyo kwaye uyakhazimla, nangona ubuncinci buphukile ngemingxunya emine esivumela ukuba sixhome esweni eludongeni, kunye nakwimigca yokungenisa umoya kunye nonxibelelwano, ezingambalwa. Ukunikezelwa kwamandla kwahlukile, into exhaphakileyo kolu hlobo lwemveliso, into esisindisela indawo eninzi kwidesktop. Iikona zijikelezwe ngokupheleleyo kwaye zisinika imeko elungileyo yokuqhubeka. Emuva kunye Ngeqhosha le-EasySelect sinokuhamba ngocwangciso kunye nemenyu yolungiselelo kwaye ke sinako ukulawula yonke into.
Le yimilinganiselo esemthethweni:
Ubunzima ngesitandi: 4,33 Kg
Iimpawu: Umsebenzi olungileyo osebenza kunye
Isuphavayiza ye-27-intshi inezigqibo ezingaphezulu ngokwaneleyo, ukukhanya kunye neempawu Nabani na ochitha ixesha elide phambi kwayo, inyani kukuba isinike amava omsebenzisi okhohlakeleyo, kwaye ngenani oku kuguqulela ngolu hlobo lulandelayo:
Iphaneli: Iintshi ezingama-27 - 68,6cms
Isigqibo: Epheleleyo HD 1080p
Ukulinganisa Umlinganiso wembonakalo: 16: 9
Uhlobo lwe ipaneli: I-LCD yePLS-LED
Ukuqaqamba: I-250 cd / m2
Umahluko: 1000: 1
Umbono wekona: 178º
Ukuphucula i-LAG: 5ms (GtG) nge-60 Hz
Uluhlu lwe imibala: Isigidi se-16,7-sRGB kwi-122,9%
Ngale ndlela, kunzima ukucinga ukuba asinakuswela ntoNgokukodwa xa ucinga ukuba i-Philips ibandakanya uthotho lweempawu zebrendi eziphakamisa umgangatho kunye nokusebenza ukuze ungasweli nto kwaye siza kuthetha ngazo apha ngezantsi.
Ukuphuculwa kwesoftware: Iimpembelelo zobuninzi bePhilips
Iziphumo zomfanekiso zinomtsalane, akunakwenzeka ukunqanda ukuthelekiswa nezinye iimveliso ezinje nge-ASUS okanye i-AOC, kwaye ukubek'esweni kwePhilips kujongeka kumangalisa xa kuthelekiswa nezi, kwaye inkampani iyayazi ukuba yenza kakuhle, ubukhulu yinto ebalulekileyo kule ndima. Siqala ngomsebenzi Umbala oBanzi obanzi: «Ubuchwephesha be-Ultra Wide-Umbala unikeza uluhlu olubanzi lwemibala yomfanekiso oqaqambileyo. Isikali sombala omkhulu we-Ultra Wide sivelisa imifuno yendalo engaphezulu, umbala ocacileyo obomvu, kunye neblues ezinzulu. Ngokufanayo, iPhilips ibandakanya inkqubo yayo IFlickerFree, Itekhnoloji ye-Philips engenasimahla isebenzisa isisombululo esitsha sokulawula ukukhanya kunye nokunciphisa i-flicker ukuze ujonge ngakumbi.
Ekugqibeleni itekhnoloji Umahluko okrelekrele Isisondeza ekusebenzeni kweepaneli ngobuchwephesha obumsulwa obumnyama, kwitekhnoloji ye-Philips ehlalutya umxholo owujongayo, uhlengahlengiso oluzenzekelayo kwimibala kunye nokulawula ubungakanani be-backlight ukuphucula ngamandla umahluko, uguqulelo lwento efana ne-HDR.
Unxibelelwano kunye nonxibelelwano lomsebenzisi: Ke wena awuphosi nantoni na
I-1x uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-MHL
Iziphumo ze-1x zomsindo wee-headphone okanye izithethi
Kweli candelo ayisoze ine imvula ngokuthanda komntu wonke, ngaphandle kwesizathu sokuthetha, mhlawumbi ngokobuqu i-HDMI eyongezelelweyo iya kuphoswa yinto kwaye ngokuqinisekileyo igxothe uqhagamshelo lwe-VGA emiselwe ukuba inyamalale, kodwa bambalwa abaqhubeka nokubheja kolu nxibelelwano, ngenxa yezizathu Andikwazi ukulawula. UPhilips wayefuna ukwandisa kakhulu uluhlu lwabathengi, ngaphandle kwamathandabuzo.
Kuyafana ne-UI, iqhosha langemva EasySelect iyasinceda Ukutshintsha iimenyu, ezibekwe ngobuchule kudonga lwangasemva, kusenza sikwazi ukwenza uhlengahlengiso olukhawulezileyo nolulula kuseto lokujonga kwimenyu yokubonisa eskrinini.
Sihlalutya i-27-intshi yePilips esweni (276E7QDSW)
Amava ethu ayamangalisa kuzo zonke iindawo, umahluko olungileyo kunye nemibala eqaqambileyo, kuphela ngokutshintsha iprofayili esinokuyidlala okanye sisebenze, ixhomekeke kwiimfuno zethu, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ii-intshi ezingama-27 zibonakala zanele kuninzi lwabasebenzisi. Kukubeka iliso ekucetyisweni ukuba ungathenga kwiAmazon ngamaxabiso ajikeleze i-210 euro en LONTO.
Uyayifuna? Sicinga ewe, yiyo loo nto simema wena ukuba uthathe inxaxheba kwirafile eza kwenziwa yi-Actualidad Gadget nguPhilips kunye ne-TEXT100. ukuphumelela esweni iliso:
RT i-tweet yokunikwa kwi-@agadget (Twitter)
Yabelana ngefoto yokupha ngamabali akho e-Instagram ngokucaphula @actualidadgadget
Umzobo weSizwe (Spain)
Ophumeleleyo ngoJanuwari 5, 2018
Ophumeleleyo uya kubhengezwa nge-Twitter nakwi-Instagram
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutye i-27-intshi yePilips esweni (276E7QDSW) ngeGIVEAWAY